7 Workflows mandeha ho azy izay hanova ny lalao marketing | Martech Zone
7 Workflows mandeha ho azy izay hanova ny lalao varotrao
Zoma, Desambra 10, 2021 Alakamisy, Desambra 9, 2021 Chintan Jain
Ny marketing dia mety ho sarotra ho an'ny olona rehetra. Tsy maintsy mikaroka ireo mpanjifa kendrenao ianao, mifandray amin'izy ireo amin'ny sehatra samihafa, mampiroborobo ny vokatrao, avy eo manara-maso mandra-panidy fivarotana iray. Amin'ny faran'ny andro dia mety ho toy ny mihazakazaka marathon ianao.
Saingy tsy voatery ho be loatra izany, automatique fotsiny ny fizotrany.
Ny automatique dia manampy ny orin'asa lehibe hanaraka ny fangatahan'ny mpanjifa ary ny orinasa madinika dia mijanona ho manan-danja sy mifaninana. Noho izany, raha mbola tsy nandray ny automation marketing ianao dia izao no fotoana. Avelao ny lozisialy automatique hikarakara ireo asa mandany fotoana mba hahafahanao mifantoka amin'ireo asa lehibe.
Inona no atao hoe Marketing Automation?
Ny automation amin'ny marketing dia midika hoe mampiasa rindrankajy handrindrana ny hetsika ara-barotra. Betsaka ny asa miverimberina amin'ny varotra dia azo automatique: fandefasana media sosialy, marketing amin'ny mailaka, fanentanana doka, ary fampielezan-kevitra mitete mihitsy aza.
Rehefa mandeha ho azy ny asa ara-barotra dia mandeha tsara ny sampana ara-barotra ary afaka manome traikefa manokana ho an'ny mpanjifa ny mpivarotra. Ny automation amin'ny marketing dia mitarika amin'ny fampihenana ny overhead, ny vokatra avo kokoa ary ny fitomboan'ny varotra. Izany koa dia ahafahanao mampitombo ny orinasanao amin'ny loharano vitsy kokoa.
Ireto misy antontan'isa manan-danja vitsivitsy momba ny automation marketing.
75% amin'ny orinasa rehetra dia nandray ny automation marketing
480,000 tranonkala mampiasa teknolojia automation marketing amin'izao fotoana izao
63% ho an'ny mpivarotra mikasa ny hampitombo ny teti-bolan'ny automatique amin'ny marketing
91% Ny mpivarotra dia mino fa ny automation ara-barotra dia mampitombo ny fahombiazan'ny fanentanana ara-barotra an-tserasera
Ny fampiharana ny automation ara-barotra dia miteraka fitomboana 451% amin'ny fitarihana mahafeno fepetra-amin'ny salan'isa
Rehefa manao automatique ny varotra ianao, dia azonao atao ny mikendry mpanjifa manokana, ary ampiasaina amim-pahendrena sy mahomby ny teti-bolan'ny varotrao. Ny automation ara-barotra dia miasa ho an'ny orinasa rehetra, ary ireto misy dingana ara-barotra sasany azo automatique amin'ny fitaovana workflow.
Workflow 1: Automation Fikolokoloana fitarihana
Araka ny fikarohana, 50% amin'ny fitarihana vokarinao dia mahafeno fepetra, mbola tsy vonona hividy na inona na inona izy ireo. Mety ho faly izy ireo fa afaka mamantatra ny alahelony ianao ary misokatra amin'ny fahazoana fampahalalana bebe kokoa. Saingy tsy vonona ny hividy aminao izy ireo. Raha ny marina, ny 25% amin'ny fitarihana ihany no vonona hividy ny vokatrao amin'ny fotoana rehetra, ary manantena izany.
Angamba ianao no nahazo ny fitarihana tamin'ny alàlan'ny endrika opt-in an-tserasera, ny fikarohana momba ny varotra, na ny ekipan'ny varotrao dia nahazo karatra fandraharahana tamin'ny seho varotra. Misy fomba maro ahafahana mamorona fitarihana, saingy izao no zava-misy: satria ny olona nanome anao ny mombamomba azy dia tsy midika izany fa vonona hanome anao ny volany izy ireo.
Ny zavatra tadiavina dia ny fampahalalana. Tsy te hanome anao ny volany izy ireo vao vonona. Noho izany, ny zavatra farany tokony hataonao dia ny milaza amin'izy ireo hoe: "Hey, manana vokatra tsara ny orinasanay, maninona raha mividy!"
Ny fikolokoloana fitarihana mandeha ho azy dia ahafahanao mamindra ny fitarihana amin'ny dian'ny mpividy amin'ny hafainganam-pandehany. Mifanerasera amin'izy ireo ianao, mahazo ny fitokisany, mivarotra ny vokatrao, ary manakatona ny fivarotana. Ny automatique dia manampy anao hamolavola sy hihazona fifandraisana amin'ny ho avy sy ny mpitarika tsy misy ezaka ara-barotra be asa. Mifandray amin'ny ho avy sy ny mpanjifa ianao amin'ny dingana rehetra amin'ny diany fividianana.
Workflow 2: Automation Marketing amin'ny mailaka
Ny marketing amin'ny mailaka dia manampy ireo mpivarotra hanorina fifandraisana amin'ny ho avy, ny mpitarika, ny mpanjifa efa misy ary ny mpanjifa taloha. Mamorona fahafahana ianao hiresaka mivantana amin'izy ireo amin'ny fotoana mety aminy.
Tombanana ho tonga ny isan'ny mpampiasa mailaka 4.6 miliara amin'ny 2025. Miaraka amin'ny mpampiasa mailaka be dia be, mora ny mahita ny antony mahatonga ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing mailaka. Nasehon'ny fanadihadiana fa isaky ny $1 lany amin'ny varotra mailaka dia $42 ny salanisan'ny fiverenana.
Saingy ny marketing amin'ny mailaka dia mety ho toy ny fandaniam-potoana satria be dia be ny tokony hatao: mitadiava ho avy, mifandray amin'izy ireo, mivarotra ny vokatrao, mandefa mailaka ary manaraka. Afaka manampy eto ny automatique amin'ny alàlan'ny fanaovana automatique ireo asa miverimberina mifandraika amin'ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa, ny fanaovana varotra mailaka mahomby.
Ny fitaovana automation marketing amin'ny mailaka dia afaka mandefa hafatra mifandraika amin'ny mpanjifa, voatokana ary ara-potoana. Miasa any ambadika izy io, mamela anao hiasa amin'ny asa sarobidy hafa. Afaka mandefa mailaka manokana ho an'ny tsirairay ianao, manomboka amin'ny mpitsidika vaovao ka hatramin'ny mpividy miverimberina.
Workflow 3: Fampandehanana ara-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy
Misy mpampiasa media sosialy 3.78 lavitrisa eran-tany, ary mandany 25 minitra ka hatramin'ny adiny 2 isan'andro amin'ny media sosialy ny ankamaroan'izy ireo. Izany no mahatonga ny mpivarotra maro mampiasa media sosialy mba hivarotra ny orinasany.
Rehefa mifandray amin'ny mpanjifa sy ny ho avy amin'ny media sosialy ianao dia afaka miresaka amin'izy ireo amin'ny fotoana tena izy ary mahazo ny valin-teniny. Saika ny antsasaky ny mpanjifa amerikana no mampiasa media sosialy mba hanontany momba ny vokatra sy ny serivisy, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fisian'ny media sosialy matanjaka.
Saingy tsy azo atao ny mandany ny andro manontolo amin'ny media sosialy, ary eo no idiran'ny automation. Afaka mampiasa fitaovana ara-barotra amin'ny media sosialy ianao mba handaminana, hitatitra ary hanangona hevitra. Ny fitaovana automation sasany dia afaka manoratra lahatsoratra amin'ny media sosialy.
Ny automation ara-barotra amin'ny media sosialy dia manafaka ny fotoananao, ahafahanao mifandray amin'ny mpanaraka anao ary mitazona resaka tena izy. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny tatitra navoaka mba hamolavola paikady momba izay hapetraka sy ny fotoana.
Workflow 4: SEM & SEO Fitantanana
Mety manana mpifaninana am-polony na an-jatony ianao, ary izany no antony maha-zava-dehibe ny fanaovana dokambarotra amin'ny milina fikarohana. SEM (Search Engine Marketing) dia afaka mampitombo ny orinasanao amin'ny tsenam-barotra mihamitombo hatrany.
SEO (Search Engine Optimization) dia midika hoe fanatsarana ny tranokalanao mba hanatsarana ny fahitana azy amin'ny fikarohana mifandraika amin'ny milina fikarohana. Arakaraky ny hita maso kokoa ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana, no avo kokoa ny fahafahanao hisarihana mpanjifa efa misy sy efa misy amin'ny orinasanao. Ny SEM dia mampiasa vola amin'ny fikarohana teny fanalahidy kendrena, raha ny SEO kosa dia manampy amin'ny fiovam-po sy mitazona ireo fitarihana ateraky ny paikady SEM.
Rehefa manamboatra SEM sy SEO ianao dia mampihena ny habetsaky ny asa tanana tsy maintsy ataonao ary manafaingana ny asa mandreraka. Na dia tsy afaka manao automatique ny fizotran'ny SEM sy SEO rehetra aza ianao, dia misy asa sasantsasany azonao atao automatique mba hampitomboana ny fahombiazany.
Ny fizotran'ny SEM sy SEO izay azo automatique dia ahitana ny famoronana tranonkala analytics, fanaraha-maso ny marika sy rohy vaovao, drafitra paikady votoaty, famakafakana rakitra log, paikady teny fanalahidy ary fananganana rohy. Rehefa mifamatotra tsara ny SEM sy SEO, dia mamokatra fanentanana ara-barotra nomerika matanjaka kokoa miaraka amin'ny vokatra miharihary.
Workflow 5: Workflow Marketing votoaty
Ny marika lehibe rehetra dia manana zavatra iray mandrisika azy handroso: votoaty manan-danja sy manan-danja izay mampifandray azy amin'ny mpihaino azy. Ny marketing votoaty dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra nomerika mahomby.
Fa izao ny zavatra. Ny 54% amin'ireo mpivarotra B2B ihany no mampiasa votoaty hananganana tsy fivadihana amin'ireo mpanjifany efa misy. Ny ambiny dia miezaka ny hahazo raharaham-barotra vaovao. Aza diso hevitra izahay, tsy ratsy ny fandresena raharaham-barotra vaovao, fa ny fikarohana dia mampiseho fa ny 71% amin'ny mpividy dia esorina amin'ny votoaty toa ny varotra. Noho izany, raha tokony handany fotoana be hivarotana amin'ny mpanjifa sy mpanjifa efa misy ianao, ny tokony hataonao dia ny fiarahana amin'izy ireo.
Ny fitaovana automatique marketing votoaty dia afaka manao automatique sy manamora ny asa fivarotana votoaty miverimberina. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny paikadin'ny marketing votoaty izany. Afaka mamantatra mora foana ny fironana farany amin'ny atiny ianao ary mampiasa ilay fitaovana hamoronana hevitra.
Miaraka amin'ny paikadin'ny varotra votoaty tsara dia manorina fahatokisana amin'ny mpihaino anao ianao, mifandray amin'ny ho avy sy mpanjifa, miteraka fitarihana ary manatsara ny fiovam-po. Ny tsy fetezan'ny votoaty dia manampy ny orinasanao ho azo itokisana kokoa, manorina fahatokisana amin'ny mpanjifa ary manamafy ny lazan'ny orinasanao.
Raha mihavitsy ny fitarihana ny orinasanao ary mihena ny varotra, dia mety hahagaga ny fanentanana ara-barotra. Ny fanentanana ara-barotra tsara dia mety hiteraka fahalianana vaovao amin'ny orinasanao ary hampitombo ny varotra. Na izany aza, ny fanentanana mahomby dia tsy maintsy misy vokatra azo refesina-toy ny fitomboan'ny varotra na fanontaniana momba ny raharaham-barotra bebe kokoa.
Ny fitantanana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia misy ny drafitra tsara sy ny fanatanterahana hetsika mikendry ny hamokatra vokatra tsara. Miantoka ny fanovàna ny tanjon'ny orinasa ho tanjona azo tanterahina mifandraika amin'ny filan'ny mpanjifa ny fanentanana.
Manamora ny asan'ny mpivarotra ny automatique amin'ny fitantanana fanentanana amin'ny marketing. Ohatra, ny mpivarotra dia afaka manao automatique ny fikorianan'ny firaka. Rehefa mameno endrika iray ny prospect, dia atomboka ny filaharan'ny ezaka ara-barotra. Ny mailaka dia azo alefa ho azy mba hampiroboroboana dokam-barotra, fangatahana fandraharahana, na hangataka varotra.
Workflow 7: Famolavolana hetsika sy marketing
Ny hetsika ara-barotra dia mitondra vokatra na serivisy mivantana amin'ny ho avy sy ny mpanjifa efa misy. Afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fahitan'ny marika mialoha, mandritra, ary aorian'ilay hetsika. Ny hetsika iray koa dia afaka manampy ny orinasa hamorona fitarihana sy fahafahana vaovao. Ny mpivarotra dia afaka mampiroborobo vokatra na endri-javatra manokana mba hampitomboana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, ny fandraisana anjara ary ny fihazonana azy.
Saingy ny hetsika ara-barotra mahomby rehetra dia tsy maintsy voaomana sy voaomana tsara. Ny fitaovan'ny workflow dia ahafahan'ny mpivarotra manao automatique ny dingana manontolo– manomboka amin'ny fisoratana anarana, ny fampiroboroboana hetsika, ka hatramin'ny fanehoan-kevitra.
Rehefa mampiasa hetsika ho toy ny fitaovana ara-barotra ianao, dia manolotra mpanjifa mety ho fifandraisana mivantana amin'ny orinasa ianao ary manampy azy ireo hahafantatra ny toetrany, ny fifantohana ary ny fomba fijeriny.
Misy fiantraikany lehibe ny Marketing Automation
Amin'ny tsena iraisam-pirenena, zava-dehibe ho an'ny orinasanao ny misongadina amin'ny vahoaka. 80% amin'ny mpampiasa automation marketing mitatitra fiakarana amin'ny fahazoana firaka, ary maro ireo orinasa mampiasa teknolojia mba hampahomby ny ezaka ara-barotra ataony. Ny automatique dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny lafiny rehetra amin'ny fanentanana ara-barotra ataonao–hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ka mahatonga ny dingana manontolo ho milamina sy tsy misy manahirana.
Tags: automatiqueemail marketing automationautomation fandrindrana hetsikaautomatique fitarihana fitaizanaautomation marketingstatistika automation marketingstatistika automation marketingmarketing marketing automationfivezivezena amin'ny marketingfitantanana ppcmilina fikarohana automatique marketingmilina fikarohana optimization automationfitantanana fanatsarana ny motera fikarohanaFitantanana ara-barotra fikarohanasemSEOautomation marketing amin'ny media sosialyantontan'isainona ny automatisation marketing
Chintan Jain dia talen'ny Associate Marketing Marketing ao amin'ny Kissflow Workflow, sehatra iraisana ahafahan'ny fikambanana mitantana ny karazana asa rehetra amin'ny toerana iray. Chintan dia mpandraharaha ara-barotra mahay izay manoratra betsaka momba ny lohahevitra toy ny teknolojian'ny toeram-piasana, ny fitantanana ny asa, ary ny toeram-piasana nomerika. Izy koa dia mandray anjara mavitrika amin'ny sehatra fandraharahana sy teknolojia isan-karazany.
Rewind: Ahoana ny fomba hamerenana ho azy ny Shopify na Shopify Plus Store
Ahoana ny fomba fanaovana kalandrie votoaty amin'ny marketing video